विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : नलगाड नगरपालिका–८ की लक्ष्मी केसीको समय दैनिक बिहानबेलुका बाख्रालाई चरिचरन क्षेत्रमा लैजाने र ल्याउँदैमा बित्छ । उहाँ अहिले कक्षा १० मा हुनुहुन्छ । शहरबजारमा अनलाइनबाट कक्षा लिएको कुरा फोनमा थाहा पाएपछि उहाँको मन भक्कानिएर आउँछ तर लक्ष्मीको घरमा मोबाइल चार्ज गर्नेसम्मको विद्युत् छैन । गाउँमा सोलारबाट चार्ज गरेर ल्याएको मोबाइलमार्फत साथीहरूलाई फोन गरेर पढाइका विषयमा बुझ्नुबाहेक लक्ष्मीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
Prevतातोपानी कुण्ड स्नानका लागि आएका पाहुनामार्फत सरेको कोरोनाले सिंगो गाउँका घरघरमा संक्रमण
Nextलासमा समेत बार्गेनिङ, ९० रूपैयाँमा किनेको औषधी ८ हजारमा बिक्री
सार्वजनिक यातायात खोल्ने बिषयमा यस्तो निर्णय हुँदै !
बुढ्यौलीमा आमा–बाबुले के खोज्नुहुन्छ ? अर्थात जान्नुहोस् भोलि तपाईले के खोज्नुहुन्छ ?